Kismaayo News » Ciidamada Ahlu Sunna oo la qarameeyay
Ciidamada Ahlu Sunna oo la qarameeyay
Kn: Xarunta maamul gobolleedka Galmudug, Dhuusamareeb ayaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa lagu wareejiyay cutubyo ka tirsan ciidamadii Ahlu Sunna ee ka ariminaayay inta badan magaalooyinka gobolka Galguduud iyo qayb kamid ah gobolka Hiiraan.
Xaflad ka dhacday Dhuusamareeb ayuu ciidamadaasi ku gudoomay madaxweynuhu, waxayna hadda wixii ka danbeeya ciidamadaasi kamid noqon doonaan ciidamada qalabka sida ee dawladda federaalka Soomaaliya. Waxay sidoo kale ciidamadani saldhig u noqon doonaan aas-aaska ciidamada qalabka sida qaybtooda 21aad oo saldhiggoodu ahaanjiray barisamaadkii magaalada Dhuusamareeb.
Ahlu Sunna oo haatan si rasmi ah ula midowday maamulkii Galmudug ayaa lahayd ciidamada ugu tirada badan, ugu xoogga badan uguna qalabaysan marka laga hadlayo maleeshiyaadka ka askuman gobollada dhexe.
Talaabadan ay Ahlu Sunna ciidamadeeda ugu wareejisay dawladda dhexe ayaa noqonaysa talaabo aad u wanaagsan oo horseedi karta hadii si xigmadaysan looga faa’iidaysto in sugista amaanka gobollada dhexe laga hago halmeel si ay u sahlanaato in laga hortago dadka fidmowalayaasha ah ee salka u ahaa shaqaaqooyinka gobolka ka dhaca ee soo noqnoda kuwaasi oo galaafta dad tiro badan.